I-MainWP: Phatha ngaphakathi Amasayithi Wakho we-WordPress | Martech Zone
I-MainWP: Phatha Ngaphakathi Amasayithi Wakho we-WordPress
NgoMsombuluko, Februwari 8, 2016 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 9, i-2016 Douglas Karr
Abantu abakhulu e-Automattic bebelokhu behlanganiswa eduze ukuphathwa kwe-WordPress okumaphakathi ngabo Jetpack Xhuma. Sengivele nginenkinga eyodwa ngayo, noma kunjalo, ngilahlekelwa yikho konke okwedlule Jetpack analytics lapho isiza sami ngandlela thile sinqanyuliwe futhi isiteji sesiteji sixhunywe kunalokho. Kube bummer impela - futhi ngiyabonga ukuthi ngine-Google Analytics nayo efakiwe.
Uma ungafuni wonke amathuluzi akho ancike kwipulatifomu eyodwa enkulu efana ne- Jetpack, kunezinye izindlela. Muva nje, iqembu labasebenzisi be-WordPress eliphambili lixoxile I-MainWP. Kanjalo, I-MainWP kuthatha indlela ehlukile yokuthi amasayithi amaningi aphethwe kanjani - njengokukuvumela ukuthi weqe ukushicilela okuqukethwe futhi ungeze abasebenzisi kuwo wonke amasayithi.
I-MainWP inokufakwa okungaphezu kuka-100,000 futhi iyaqhubeka nokugcina isethi eqinile yezici eziyinhloko zamahhala:
Ukuphathwa Okulula - Ideshibhodi ye-MainWP ithatha inkinga ekuphatheni izingqikithi nama-plugins akho. Ungabuyekeza ngokushesha ukuthi yimaphi amasayithi wakho we-WordPress anezibuyekezo ezitholakalayo ezivela endaweni eyodwa emaphakathi. Ukuchofoza okukodwa kuzokuvuselela konke.
Ama-plugins alahliwe - I-MainWP ihlola isimo sokugcina esibuyekeziwe sama-plugins nezindikimba futhi ikuxwayisa uma ingavuselelwanga esikhathini esithile. Lokhu kukunikeza ukuqonda kokuthi ngabe i-plugin noma itimu kungenzeka ishiywe ngumlobi ukuze ukwazi ukubheka i-plugin esesimweni esengeziwe.
Ukufinyelela okukodwa kokuchofoza - Nge-MainWP Dashibhodi yakho ungakhohlwa ukuthayipha i-URL ngayinye, ukungena ngemvume ne-password ukufinyelela izingosi zakho ze-Child WP-Admin. Senze ukufinyelela kuzo zonke izingosi zakho ze-WordPress kube nomoya ngokufinyelela ngokuchofoza okukodwa okunembile. Zulazula kumasayithi wakho angaphansi kwemenyu bese uqhafaza isixhumanisi somlawuli ukuze uvule, futhi ungene ngokushesha futhi ukulungele ukuphatha. Kungasekho ukungena ngemvume namaphasiwedi!
Ukuthuthukiswa okukodwa kokuchofoza - Nge-MainWP Dashibhodi yakho ungabuyekeza wonke amasayithi akho ngokuchofoza nje inkinobho, asisekho isizathu sokungena kumasayithi akho ngamunye uhlole izibuyekezo ezitholakalayo. Ungashintsha futhi ukuthuthukiswa kwetimu noma kwe-plugin (noma ungakunaki).
Izipele Ezinokwethenjelwa - Sebenzisa isici sakho sokusekelayo se-MainWP Dashboard futhi ujabulele izinsizakalo zokusekelwa kwekhwalithi ye-premium yawo wonke amasayithi wakho we-WordPress. Ungakhetha nokukhipha ngaphandle amafolda athile angabalulekile ekuthunyweni. Ungashintsha futhi izipele zakho futhi ube nezilungiselelo ezahlukahlukene zamasayithi ahlukile ngokuya ngezidingo zakho.
Ukuphathwa kokuqukethwe - Ukushicilela okuqukethwe kumasayithi manje sekulula ngangokunokwenzeka. Khetha isayithi lakho ohlwini, bhala okuqukethwe, bese ushicilele, ngaphandle kwezinkinga zokungena kwisayithi ngayinye. Kulula ukuphatha izixhumanisi, ukuphawula, nogaxekile futhi sisebenzisa imisebenzi yethu yokushicilela, yokususa neyogaxekile.
Ukuphathwa Komsebenzisi - Ukuphatha abasebenzisi kumasayithi engane yakho manje sekulula ngangokunokwenzeka. Ungaphatha bonke abasebenzisi bakho kusuka kuwo wonke amasayithi akho ngqo kusuka kudeshibhodi yakho ye-MainWP ngaphandle kwesidingo sokungena ngemvume kumasayithi wakho we-WordPress ngamunye.
Ukuzibamba - Ideshibhodi yakho eyinhloko ye-MainWP iyi-plugin ebanjelwe ukufakwa kwakho kwe-WordPress hhayi kuma-server wethu angasese. Asigcini amarekhodi ezenzo zakho, amasayithi Wezingane noma ukuthi usebenzisa kanjani i-plugin.
Bhalisela ubulungu futhi ungathola ukufinyelela kukho Inqwaba evela ku-MainWP, izandiso ezingaphezu kwama-36 ze-premium ezengeza amandla aqinile ongeke uzithole kwenye indawo. Ukuhlolwa kwesixhumanisi esaphukile, ukuhlaziywa kwejubane lekhasi, analytics ukuhlanganiswa, ukuhlela okuthunyelwe, ukuphathwa kwezilungiselelo ngobuningi, ukuqapha isikhathi, kanye nokufuduka kweBlogvault.
Bhalisela i-MainWP Mahhala!
Tags: izipele ze-wordpress ezizenzakalelayoukuphathwa kwe-wordpress okuphakathiengiswukuthuthukiswa okuzenzakalelayo kwe-wordpressizipele ze-wordpressukuphathwa kwe-wordpressUkuthuthukiswa kwe-plugin ye-wordpressukuthuthukiswa kwetimu ye-wordpressukuthuthukiswa kwe-wordpress
Izindlela ezi-5 ze-Animated Explainer Videos Zandisa Ukusebenza Kokumaketha Okungenayo
Feb 9, 2016 ngo-4: 23 PM
Lona umqondo omuhle. Isebenza kahle kangakanani kuwe, Doug?
Feb 10, 2016 ngo-10: 51 AM
Simisa nje inethiwekhi lapho sizoyisebenzisa khona ukusebenzisa iWhitney. Kuze kube manje, sisebenzise i-Managed WordPress Hosting ukuphazamisa eminye yale misebenzi. Ngiyakuzonda ukuba yi-ejensi embonini yokubamba nokuphathwa kwesayithi - ngincamela ukukhokhela imali ethe xaxa ngomsingathi oyinakekelayo.